Qaanso roobaad rogan, oo ah dhacdo naadir ah oo saadaasha hawada oo muuqaalkeeda Yurub loo aaneeyo isbeddelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Qaanso roobaadka rogan ee lagu sawiray magaalada Cambridge, England
A qaanso roobaadka foorari? Taasi suurta gal ma tahay? Hagaag, inkasta oo ilaa hada aysan aniga ila dhicin in dhacdadan saadaasha hawada ee dhifka ah ay jiri karto, tan sidoo kale loo yaqaan 'Circumzenithal arch' ma ahan shaqada qaar ka mid ah kaftanka sawir qaadaha, laakiin waa wax aad u dhab ah.
Sawirka kore waxaa lagasoo qaaday England, agagaarka Cambridge. Si kastaba ha noqotee, waa wax aan caadi ahayn dhacdadan inay ka dhacdo meel ka baxsan Pole North. Muuqaalka noocan ah qaansoroobaad Midkood kuwa badan Fikradaha indhaha taasi waxay u dhacdaa falaadhaha qorraxda awgeed - Yurub gudaheeda waxa khubaradu u nisbeeyeen isbeddelka cimilada ee welwelku ku jiro ee Dhulku ku dhex milmay ... markaa uma fiicna sidii ay markii hore u muuqatay.
El qaanso roobaad qallalan, ifafaalaha kaliya ee awooda inuu sawiro dhoola cadeyn midab leh cirka, wuxuu ubaahan yahay duruufo kaladuwan oo qaansoroobaad caadi ah inuu sameysto. Iftiinka qoraxda waa inuu ka boodaa kiristaalo baraf leh jawiga sare, kaasoo u diraa falaaraha qorraxda kor.
Xigasho - Sayniska ZME
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Qaanso roobaadka rogan ma jiraa?
Waxaan awooday inaan sawir kahelo 2012, Resistencia, Chaco. Argentina
Waxaan hayaa sawirro qaanso roobaad rogaal celis ah laga bilaabo Diseembar 19, 2015 oo ku taal La Vela de Coro, gobolka Falcón, Venezuela. Waa deked yar oo ku taal gobolka galbeedka galbeed ee Venezuela, ka hor hor Antilles Netherlands hore.
Waxaan hayaa sawirro shaley ah concordia entre Ríos ... laba qaanso roobaad oo la wada rogay ...